I-anecdote kaCela | Izincwadi Zamanje
I-fart enomsindo kaCamilo José Cela
UDiego Calatayud | | Literatura
Kwezinye izikhathi siye sabhekisa amanye ama-anecdotes kusuka UCamilo José Cela, umbhali omkhulu waseGalician owathola iNobel Prize ngosuku lwakhe futhi washiya ubuciko bemibhalo yomhlaba efana neLa Colmenta.
Into ehlekisayo ukuthi zonke zinesici esifanayo: inhlamba.
Futhi nguCela lowo, zombili kwezinye izindima zakhe isebenza njengoba ikakhulukazi empilweni yangempela, wayengumthandi we-eschatology owayengagundi nje izinwele ekubeni ongajabulisi kepha ahlekise kwezinye zezinkulumo zakhe kepha futhi wayeziqhenya ngokubatshela.
Esinye salezo okukhulunywe ngaso ngumbhali uqobo senzeka endaweni ye- gal isidlo sakusihlwaa lapho bonke ababekhona babevelele.
Ngesinye isikhathi, uCela, obezitika ngophuzo olumnandi phakathi kwesifuba nangemuva, uqhume. umoya lokho kuzwakale kulo lonke igumbi futhi amagama ame phakathi kwabadli abaqale ukubonakala bengakholwa beqonde endaweni lapho umhleli abehleli khona engazi kahle ukuthi ngubani obekunguye ophethe umsindo omkhulu.
UCela, ngokubona ukuthi le ntokazi ebisecaleni lakhe ibingasaboni kahle, uthathe ithuba lokungabaza kancane, esho ngokuzwakalayo: "Ungakhathazeki mamaz, sizothi bekuyimi" ...
Imininingwane engaphezulu - Ama-anecdotes ezincwadi, phakathi kwenganekwane nomlando
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » I-fart enomsindo kaCamilo José Cela
ULuis Jose Oropeza kusho
Yeka umcimbi omuhle…! Kwakufanele kube uCamilo omkhulu ..! Kepha mina, ngiyayithanda i-eschatology, awu, kubonakala kimi kuyihlaya elibi kakhulu. I-Eschatology iholela ekuhlekiseni okuphelele.
Phendula uLuis José Oropeza
Ezweni lami ungambiza ngengulube endala nokuthi "isaka lamahansi." Lapho izingane ezincane zifunda ukusho indle bese zichama ziyakuphinda ngoba zikuthatha njengomusa. Ngenxa yobudala bomlingiswa, ngithanda ukukholelwa ukuthi kungukuhlehla okujwayelekile kwe-senescence. Angikwazi ukufanelekela labo abathola ukuthi lokhu kuziphatha kuyadlala, kodwa ngendlela efanayo.
Jose Antonio kusho
UValle-Inclán kanye nomcibisholo wakhe onobuthi kuJacinto Benavente
UJules Verne: ukudala ngezizathu zokwenza okuthile